घरको यो स्थानमा राख्नुहोस् लाफिङ्ग बुद्धको मूर्ती , धन बढ्छ ,भाग्य बढ्छ ! - Sakaratmak Soch
घरको यो स्थानमा राख्नुहोस् लाफिङ्ग बुद्धको मूर्ती , धन बढ्छ ,भाग्य बढ्छ !
हामीले बजारमा बेच्न राखिएको लाफिङ्ग बु’द्धको मूर्ती त देखेका नै छौँ । मानिसहरु लाफिङ्ग बु’द्धको मू’र्तीलाई आफ्नो घरमा राख्ने गर्छन् । लाफिङ्ग बु’द्धको मू’र्ती घरमा रा’ख्दा सुख, स’मृद्धि र भा’ग्य च’म्किने वि’श्वास गरिन्छ । तर के तपाईलाई ला’फिङ्ग बु’द्ध को थिए भन्ने थाहा छ ? साथै हाँ’स्नुको का’रण के हो ? यदि थाहा छैन भने हामी यसको बारेमा जा’नकारी दि’न्छौँ ।
त्यसपछि जापान तथा चीनका मानिसहरुले उनलाई हाँ’स्नेवाला बु’द्धका नामले बो’लाउँन थाले । त्यसैलाई अं’ग्रेजीहरुले ला’फिङ्ग बु’द्धका नामले च’र्चित ब’नाईदिएका हुन् । उनका अ’नुयायी तथा शि’ष्यहरुले उनको हाँ’सोको स’न्देश बि’भिन्न देशमा फै’लाउँन शुरु गरे । अ’झ ची’नमा त उनका अ’नुयायीहरुले ला’फिङ्ग बु’द्धलाई यसरी प्र’चार गरेकी त्यहाँका मा’निसहरु भ’गवान मान्न थाले ।चीनका मा’निसहरु ला’फिङ्ग बु’द्धलाई पु’ताईका नामबाट चि’न्ने गर्छन् । ला’फिङ्ग बु’द्धको मू’र्ती घरमा रा’ख्दा सुख र स’मृद्धि तथा भा’ग्य च’म्किने कु’रामा उनीहरु वि’श्वास रा’ख्छन् ।
यसैगरी हरेक मानिसको आफ्नै शक्ति हुन्छ, जुन आफ्नै वरिपरि रहने र हामीद्धारा प्रयोग गरिएको वस्तुलाई पनि प्रभावित गर्छ । यस्तो अवस्थामा अरुको चिज प्रयोग गर्नु आफ्नो लागि दुर्भाग्य र आर्थिक समस्याको कारण बन्न सक्छ । यदि कुनै पनि व्यक्तिले अरुको चीज आफ्नो साथमा राख्छ भने उसको सारा नकारात्मक–सकारात्मक शक्ति ऊसँगै जान्छ, जसले लियो ।
के–के हुन् ति चिज ?कलम – तपाईलाई याद छ, साथीलाई कति ओटा कलम मागेर फर्काउनु नै भएन ? यस्तै धेरै हुन्छ , कि कसैको कलम सापट लिएर फिर्ता दिनै भुलिन्छ । तपाईका लागि यस्तो नगर्नु राम्रो हुन्छ । आर्थिक समस्याको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले भूलेर पनि कसैको कलम आफ्नो साथमा नराख्नुहोस् ।
रुमाल – अन्य व्यक्तिको रुमाल प्रयोग गर्नु दुई व्यक्तिबीच तनाव वा झगडाको कारण बन्छ । अरुको रुमाल प्रयोग गर्दा लगातार पैसाको नोक्सानको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।घडी – हातमा लगाइने घडीले व्यक्तिमा राम्रो अथवा नराम्रो शक्तिलाई सार्छ । दोस्रोको घडी लगाएमा काममा असफलता तथा आर्थिक नोक्सान हुनसक्ने हुन्छ ।
ओछ्यान – कुनै दोस्रो व्यक्तिको ओछ्यानमा सुत्नु पनि वास्तु दोष मानिन्छ । यसो गर्नाले सुत्ने व्यक्तिसँग सधै झगडा वा अन्य धनलाई लिएर समस्या बेहोर्नु पर्छ भनिन्छ ।धन – कसैको धनमा आँखा लगाउनु वा सापटी लिएर फिर्ता नदिने गर्नु मानिसका लागि आर्थिक समस्याको कारण बन्नसक्छ । त्यसैले, कसैको सापट लिएपछि अवश्य फर्काउनुहोस् ।कपडा – अर्कोको कपडा मागेर प्रयोग गर्नु पनि तपाईका लागि धेरै किसिमका समस्या र दुखहरुको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले अरुको कपडा मागेर नलगाउनुहोस् ।
डेटिङ जानहरुको लागि यस्तो दुख छ, के प्रेम गर्नु अपराध हो ?
ॐ कसरी जप गर्ने ? यस्तो हो पक्का तरिका
यी मन्त्र र साधनाका लागि यी माला प्रयोग गर्ने
भाग्य चम्काउने यी सजिला ४ धारणाहरु साह्रै उपयोगी छन्